နယူးဇီလန်ရှိဗြိတိန်မှကားတစ်စီး ၀ ယ်ခြင်း ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှု
ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ကားများတင်သွင်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရုံတင်မကဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အစ်မဖြစ်သောဂရင်းနစ်နိုက်တ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နယူးဇီလန်မှတစ်ဆင့်နယူးဇီလန်ရှိသင်၏တံခါးကိုကား ၀ ယ်ယူခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, Fasttrack မော်တော်ယာဉ်လိုက်နာမှုစင်တာ။
သတ်မှတ်ချက်များ၊ မိုင်အကွာအဝေး၊ နှစ်များအပါအ ၀ င်သင် ၀ ယ်လိုသည့်ကားကိုသာရိုးရှင်းစွာပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ဗဟုသုတကို အသုံးပြု၍ ယူကေရှိသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကားကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုပါမည်။ သင်ရွေးချယ်မည့်ကားအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေပြီးနောက်သင်မည်သည့်ကားကိုသင်လိုချင်သည်ကိုအတိအကျပြောနိုင်ပြီး၊ သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း.
Greenwich Knight ၌၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကားများအားလုံး AA ကိုစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးသူများကိုဝယ်သူအားစိတ် ၀ င်စားမှုရှိစေရန်မကြာမီသူတို့ပိုင်ဆိုင်သောကားသည်မောင်းနှင်မည်၊
Greenwich Knight ၌သင်ရွေးချယ်သောကားသည်နယူးဇီလန်မော်တော်ယာဉ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်နယူးဇီလန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအေဂျင်စီတို့နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ယူကေရှိကားစျေးနှုန်းများကိုညှိနှိုင်းသည့်အခါနယူးဇီလန်၌သင်၏ကားကိုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်စုဆောင်းထားသည့်ပမာဏကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
Greenwich Knight မှ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သင့်နေထိုင်သူတိုင်းပြည်ရှိစောင့်ဆိုင်းစာရင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ပြီးစာရင်းစျေးနှုန်းများကိုများစွာသက်သာစေသည်။
စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကိုကျေနပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်ရှိဤကားကို ၀ ယ်နိုင်သည် သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း ထို့နောက်နယူးဇီလန်၊ အများအားဖြင့်အော့ကလန်သို့စီစဉ်သည်။ Greenwich Knight နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် ၀ ယ်ယူခြင်းမှသင်နှင့်အတူရောက်ရှိလာသောကားအထိ ၆ ပတ်ကြာသည်။ ယူကေမှ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်နယူးဇီလန်စျေးနှုန်းများကိုကျော်။ ငွေစုဆောင်းနိုင်ပြီး ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အဆင်ပြေမှုကိုလည်းသင်ရရှိသည်။
ငါ VAT ကိုပေးဆောင်ဖို့လိုပါသလား?
Value Added Tax (VAT) သည်နယူးဇီလန် GST နှင့်ညီမျှပြီးလက်ရှိတွင် ၂၀% ရှိသည်။
သင်ဝယ်ယူသောကားကိုဥရောပမဟုတ်သောနိုင်ငံသို့တင်ပို့သည်ဟုအတည်ပြုပြီးပါကအသစ်သောနှင့်အသစ်အသုံးပြုသောကားအရေအတွက်အားလုံးမဟုတ်သော်လည်းအားလုံးသော VAT ပြန်အမ်းငွေကိုရထိုက်သည်။ ဤသည်ကို VAT-qualifying အဖြစ်လူသိများသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကားတစ်စီး ၀ ယ်ပြီး၎င်းကိုသင်၏နယူးဇီလန်ကဲ့သို့သင်၏ဥရောပမဟုတ်သည့်နိုင်ငံသို့ပြန်ပို့သောအခါသင်သည် VAT ကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းပေးလိမ့်မည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် Greenwich Knight သည် VAT အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကားများဖြစ်သည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းနေသည့်ကားသည် VAT အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါက Greenwich Knight သည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုအထောက်အကူပြုပြီးဖောက်သည်များ၏အကျိုးအတွက် VAT ကိုပြန်လည်လျော်ကြေးပေးမည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်စည်ပမာဏကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်ကြိုးပမ်းလိမ့်မည် သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း / အကောက်ခွန်ရုံးအတွက်ပို့ကုန်အထောက်အထား။
စျေးနှုန်း NZ $135,000
Greenwich Knight NZ စျေးနှုန်း - $97,500
စျေးနှုန်းများ GST ပါဝင်သည်
ပုံမှန် သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း - $ 2000
လိုက်နာမှုစစ်ဆေးခြင်း - $ 800
Mercedes C63 S က
စျေးနှုန်း NZ $ 165,290 + Options ကို
Greenwich Knight NZ စျေးနှုန်း - $ 113,500 + Options ကို
စျေးနှုန်း NZ $260,000
Greenwich Knight NZ စျေးနှုန်း - $209,000
BMW X5 40d M အားကစား
စျေးနှုန်း NZ $125,000
Greenwich Knight NZ စျေးနှုန်း - $107,000
စျေးနှုန်း NZ $89,950
Greenwich Knight NZ စျေးနှုန်း - $75,900